Heavy Duty Machine Tools, CNC Lathe, Mechanical Seal - သန့်စင်သည်
အနှစ် ၃၀ အတွေ့အကြုံ
၀ န်ထမ်း ၁၃၀၀ ကျော်
စတုရန်းမီတာ ၂၉၅၀၀ ကျော်
Key Feature ဤစက်သည်အောက်ပါအားသာချက်များရှိသည်။ ၁) ယေဘူယျအပြင်အဆင်အတွက်စက်ကိရိယာများသည်ကော်လံတစ်ခုတည်း၊ ဘေးပုံး၊ Fixed Facing Head Machine bed guideway ပေါ်ရှိ Worktable သည် 360 ° rotary movement ကို ၃၀၀ ဒီဂရီ rotary ရွေ့လျားမှုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပုံသဏ္ာန်တည်ဆောက်ပုံတွင်ခိုင်မာတောင့်တင်းမှု ၂) spindle အထောက်အပံ့ကိုအချက်သုံးချက်ဖြင့် spindle rigidity အားကောင်းပြီးတိကျတည်ငြိမ်မှုကိုကောင်းကောင်းနားလည်သည်။ ၃) စက်ကိရိယာများအဓိကမောင်းနှင်သည့်စနစ်တွင် ၇.၅ ကီလိုဝပ် AC မော်တာမောင်းနှုန်းတစ်ခုတည်းပါ ၀ င်သည်။
မျက်နှာပြင်မာကျောမှု၊ ကြိတ်ခွဲမှု၊ မာကျောမှု HRC50 ကိုငြိမ်းသတ်စေသောဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းစက်ခုံ၊ မီးငြိမ်းပြီးနောက် Headstock ဂီယာများ၊ တိကျစွာကြိတ်ခွဲပြုပြင်ခြင်း၊ မြန်နှုန်းမြင့်ဂီယာတိကျမှုသည်အဆင့် ၅ သို့ရောက်နိုင်သည်။ headstock လက်ကိုင်သည်ဗဟိုချုပ်ကိုင်သောလုပ်ငန်းကိုချမှတ်သည်။ feed box မှ gear သည်မီးအားကိုမြင့်မား။ ထိရောက်သောဒီဇိုင်းများကို သုံး၍ စက်ကိုလှည့်ခြင်းကို သုံး၍ စက်လုံးကျသောအစိတ်အပိုင်းများ၊ အတွင်းအပေါက်နှင့်မျက်နှာအဆုံးတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
1. မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်သင့်လျော်သောစျေးနှုန်း။ ၂။ Suspension ခလုတ်စခန်း၊ လျှပ်စစ်ကက်ဘိနက်နှင့်အိပ်ယာတို့ပေါင်းစပ်ထားသောဒီဇိုင်း။ ၃။ မီးမငြိမ်းနိုင်သော Beam၊ T-type ram (optional square ram) နှင့် plastic guide rail တို့ကိုသုံးပါ။ 4. အဆင့် ၁၆ အဆင့်စက်မှုသုံးဂီယာ၊ ငါးချက်ဓားစားပွဲသို့မဟုတ်စတုရန်းဓားစားပွဲတို့တပ်ဆင်ထားသည်။ Siemens 802C system (အခြားစနစ်များကိုရွေးချယ်နိုင်သည်) ၆။ အလင်းတန်းသည်ပိတ်။ ကာကွယ်ထားသည်၊ ချောဆီအစိတ်အပိုင်းများသည်အလိုအလျောက်အရည်ကျိုသည်။ 7. JB/T9934.1-1999 NC ကိုသုံးပါ။
ထူးခြားချက် - စက်သည်အပိုင်းအစတစ်ခုတည်းနှင့်သေးငယ်သည့်အသုတ်သို့မဟုတ်အသုတ်ထုတ်လုပ်မှုဂီယာလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက်သင့်တော်သည်။ အဓိကလျှပ်စစ်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်အစိတ်အပိုင်းများသည်ပြည်တွင်းနာမည်ကြီးတံဆိပ်ထုတ်ကုန်များကိုနှစ်ထပ်ကုန်းနံရံ၊ အမြင့်သမာဓိပန်းကန်ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့်သော့ချက်သွန်းလုပ်သောအိပ်ရာခင်း၊ ကော်လံ၊ စသည်တို့၌၎င်း၏နာမည်ကျော်အမှတ်တံဆိပ်ထုတ်ကုန်များက၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်ကျစ်လစ်မှု၊ သွက်လက်ပြီးတည်ငြိမ်တောင့်တင်းမှု၊ တိကျမှုမြင့်မားသည်။ စက်သည်အဆီမပါသောအလုပ်ခွင်နေရာတစ်ဝက်တံဆိပ်ဒိုင်းကိုသုံးသည်၊ စုပ်ယူမှုအားကောင်းခြင်း၊ ရေနံယိုဖိတ်မှုညစ်ညမ်းမှုသည်ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်သို့သွားစေသည်။
Multi- နွေ ဦး: လျော်ကြေးငွေစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်း၊
ဒီဇိုင်းပုံစံ Module ဖွဲ့စည်းပုံ: modular ကို သုံး၍ ...
စံဒီဇိုင်း: DIN24960 နှင့်အညီ ...
စံဒီဇိုင်း: DIN24960 နှင့် GB65 နှင့်အညီ ...
အင်္ဂါရပ်များ Modular အစိတ်အပိုင်းများသည်တည်ဆောက်မှုကိုလျင်မြန်စေသည်။
ထူးခြားချက် - ၁။ ဤထုတ်ကုန်စီးရီးများသည် modu ...
၁။ စက်တံဆိပ်များမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်စက်မှုတံဆိပ်သည်အရည်၏ဖိအားနှင့်သံလိုက်အင်အား (သို့မဟုတ်သံလိုက်အင်အား) ၏ပေါင်းစပ်အားထိန်းညှိမှုအောက်ရှိဆွေမျိုးလျှောမျက်နှာ၏ထောင့်တစ်ခြမ်းသို့မဟုတ်တစ်ရံအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ auxiliary seal နှင့် ac ...
လုပ်ဆောင်ခြင်းနည်းလမ်း - ကြိတ်ခွဲခြင်း
CNC lathes များကိုရှုပ်ထွေးသော rotary body shape များပြုလုပ်ရာတွင်သုံးနိုင်သည်။ ကြိတ်ခြင်းသည်အလွတ်ကိုပြုပြင်ရန်၊ အလွတ်ရွယ်၌ကြိတ်ရှုး၏လှည့်ခြင်းနှင့်လိုအပ်သောပုံသဏ္န်နှင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျအကြိတ်ကိုပုံသဏ္andန်များနှင့်ပုံစံများကဲ့သို့ရိုးရှင်းသောပုံစံများ/အသွင်များအတွက်